जब भाग्यले ११ सागमा स्वर्ण दिलाएपछी ! - News Portal from Nepal
जब भाग्यले ११ सागमा स्वर्ण दिलाएपछी !
प्रकाशित मिति : शनि, मंसिर २१, २०७६
२१ मंसिर,२०७६ काठमाडौं । वैशाखमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा म्याराथनमा दौडिएका किरण सिंह बोगटी तेस्रो भएका थिए । त्रिभुवन आर्मीका कृष्ण बस्नेतले स्वर्ण जित्दा कर्णाली प्रदेशका दुर्गा बुढाले रजत जितेका थिए ।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि २८ जेठमा बन्द प्रशिक्षण सुरु भयो । राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो र दोस्रो भएका धावकहरुलाई बोलाइयो । तेस्रो भएका किरणसिंह पर्ने कुरै भएन ।
तर म्याराथनमा दोस्रो भएका दुर्गा बुढा इन्डियन लाहुरे रहेछन् । उनी भारत फर्किसकेकाले बन्द प्रशिक्षणमा आएनन् ।
किरणसिंहको भाग्य खुल्यो । १६ साउनमा उनी पनि सागको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भए ।
प्रशिक्षणका क्रममा भएको ३५ किलोमिटर दौड भयो, आठौं राष्ट्रियमा स्वर्ण जितेका कृष्ण बस्नेतले नै पहिलो हुँदा किरणसिंह तेस्रो नै भए ।
२८ असोजमा फाइनल छनोट हुने भयो । आर्मीका कृष्ण म्याराथनमै भाग लिन चीन पुगेका थिए ।
यता किरणसिंह पहिलो भए । उता चीनमा कृष्णले पनि २ घन्टा २१ मिनेटकै टाइमिङ निकाले । कृष्णसँगै किरणसिंहले १३औं सागको म्याराथनमा दौडिने तय भयो ।
नेपाली टोली तयारीमै थियो । कृष्णका आमा बिरामी भइन् । उनी आमाको उपचारमा दौडिए । तिहारपछि उनकी आमाको निधन भयो । १३ दिन काजकृयामा बसे । १३ दिन नुन नखाएको र मातृशोकमा परेका कारण कृष्णलाई म्याराथनमा नदौडाउने निर्णय भयो र होमलाल श्रेष्ठले अवसर पाए ।
मुख्य प्रशिक्षक धनिराम भन्छन्, ‘किरणसिंह सुरुमा भाग्यले बन्द प्रशिक्षणमा आइपुगेका थिए, तर असाध्यै मेहनत गर्‍यो र त्यही मेहनतले स्वर्ण जित्न सफल भए ।’
किरणसिंह पनि स्वर्णको श्रेय धनीरामसहितका प्रशिक्षकहरुलाई नै दिन्छन् । ‘यो जितको श्रेय गुरुहरुलाई जान्छ किनकी उहाँहरुले मलाई राम्रो बाटो देखाउनु भयो’ उनले भने ।
उनकाअनुसार दशरथ रंगशालाबाट दौड सुरु गर्दा नै उनले सोचेका थिए, कि पहिलो हुन्छु कि आठौं । त्यसअनुसार उनले सुरुदेखि नै अग्रता लिए र ४२.२ किलोमिटर लामो दौडमा पहिलो भएर स्वर्ण पदक जिते ।
उनले दुरी २ घन्टा २१ मिनेट १७ सेकेण्डमा दौड पुरा गरेका थिए । दोस्रो भएका भातका रसपल सिंहले २ घन्टा २१ मिनेट ५७ सेकेण्ड तथा तेस्रो भएका श्री सिंहले २ घन्टा २२ मिनेट ७ सेकेण्डमा म्याराथन पुरा गरेका थिए ।
किरणको अर्को रोचक पक्ष पनि छ, उनले भन्दा पहिले उनका छोरा आशिषले राष्ट्रिय खेलकुद पहिले खेलेका थिए ।
उसु खेलाडी कुशलले सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिएका थिए । २०६१ मा सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खाएको भएपनि २०७३ मा एपीएफ क्लबमा आएका उनले भने आठौंमा भाग लिएका थिए ।
देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
संविधान संशोधनको बेमौसमी बहस नगरौँः मन्त्री ज्ञवाली
राष्ट्रपतिको स्वागतमा सार्वजनिक बिदा दिँइदै
कालापानीमा भारतले सडक बनाइसक्यो, सरकार के हेर्दैछः नेता रावल
कमेडी च्याम्पियनको ‘ग्रान्ड फिनाले’ चैत १ गते
बेहुला नाचेको भन्दै बेहुलीले रद्द गरिन् बिहे
दिल्लीमा हिंसाको कहर, १३ जनाको मृत्यु
शिक्षक सेवा आयोगद्वारा शिक्षक ‘लाइसेन्स’को नतिजा प्रकाशित